Ndekupi uye Nderipi MaVIP epamusoro paWorld Travel Market Anonyatso Kusangana?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Ndekupi uye Nderipi MaVIP epamusoro paWorld Travel Market Anonyatso Kusangana?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Wtn
Nhoroondo ye WTTC Cocktail
Iyo WTTC Cocktail paChesterfield Mayfair muLondon chiitiko chakakosha chepamusoro maVIP muindasitiri yepasirese yekufamba uye yekushanya. Manheru ano, Mbudzi 2 yaive nguva yekutanga vatungamiri vakakwanisa kuonana mumunhu - uye yaive yakazara.
Chesterfield Mayfair Hotel muLondon yanga iri nzvimbo kwemakore anopfuura makumi maviri kuti vatungamiriri vekushanya vasangane neWTTC Cocktail manheru echipiri eWorld Travel Market.
Husiku hwanhasi hwaive husiku, mushure memakore maviri, apo vatungamiriri vekushanya vakakwanisa kuungana, kukanganwa nezvemasiki, uye kubata.
UNWTO yakamiririrwa naAnita Mendiratta. Secretary General vakaramba vasipo.
Kweanopfuura makore makumi maviri, hushamwari uye bhizinesi zvakatanga kana kuenderera muboutique 20-nyeredzi hotera padyo neGreenfield muLondon, iyo Chesterfield Mayfair Hotel.
The World Kufamba uye Tourism Council gore rega rega panguva yeWorld Travel Market inokoka nhengo, vashumiri, uye mamwe maVIP kuti auye kuhotera yewaini, champagne, uye svutugadzike.
Ndicho chimwe chezviitiko zvinonyanya kudiwa padivi peWorld Travel Market.
Chiitiko ichi manheru ano wanga uri mukana wakanaka kune mutsva weWTTC CEO Julia Simpson, kutaura nenhengo, makurukota, uye vaenzi. Akatora hutungamiri hwesangano iri rinomiririra mazana maviri emabhizinesi makuru muindasitiri yekufambisa uye yekushanya.
Makurukota ezvekushanya kubva kuJordan, Barbados, Jamaica, nePhilippines ndevamwe vevaenzi.
Philippines ndiyo ichave iyo inotevera yeWTTC Summit muna 2022.
Juergen Steinmetz, muparidzi we eTurboNews uye Sachigaro weWTN, vakapinda chiitiko ichi uye vakatora iyi vhidhiyo pfupi:
Tourism ndeye vanhu, asiwo nezvebhizinesi - uye inoratidza pane ino WTTC cocktail.
Masangano eFai Mission anoti:
Ini ndinoramba ndichinzwa kuti vatengesi vanonetsekana nezvikumbiro zvechipangamazano ku "VIP" vatengi vavo vasingagamuchire chero zvipi zvingaite. Iyo Yekufamba & Adventure Show Series inguva-yakaedzwa uye inotariswa zvakanyanya yekushambadzira mukana wekushambadzira. Simudza mhando yako pamitambo yedu yekufamba!